मानिसले किन बारम्बार हातले अनुहार छोइरहन्छ ? – Karnalisandesh
मानिसले किन बारम्बार हातले अनुहार छोइरहन्छ ?
प्रकाशित मितिः २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:०१ March 12, 2020
काठमाडौँ। मानिसले जान अन्जान आफ्नो हातले अनुहार छोइरहन्छ। तर पछिल्लो समय हातले अनुहार छुँदा पनि कोरोना भाइरस (कोविड–१९० को संक्रमण हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
मानिसले यस्तो किन गर्छ ? यस्तो आदतलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? हामीले हरेक दिन कयौं पटक हातले अनुहारमा छोइरहेका हुन्छौं। सन २०१५ मा अस्ट्रेलियाको एक मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले यस विषयमा अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन अनुसार मेडिकल साइन्सकै विद्यार्थीले यस्तो गरेको पाइयो। मेडिकल साइन्सकै विद्यार्थीले पनि एक घण्टामा २३ पटक अनुहारमा छोएको पाइएको थियो।
सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सामेल स्वास्थ्यकर्मीले पनि हातले अनुहार छुने बानी खतरनाक भएको बताएका छन्।
मानिसले यस्तो किन गर्छ ?
मानिस तथा केही स्तनधारी जीव यस्तो गर्नबाट आफुलाई रोक्न सक्दैनन्। यस्तो लाग्छ यो हाम्रो विकासकै क्रम हो। केही जीवले अनुहारमा भएका किराफट्यांग्रा हटाउन यस्तो गर्छन् तर मानिस अथवा स्तनधारीले भने विना कारण पनि यस्तो गर्छन्। अमेरिकास्थित यूसी वार्कर विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानका प्रोफेसर डाचर केल्टनर भन्छन्, ‘केही मानिसको यस्तो गर्ने बानी नै हुन्छ भने कहिलेकाँही हामी अन्जानमै अनुहारमा हात लगिरहेका हुन्छौं।’
व्यवहार विज्ञानसँग जोडिएका अर्का विशेषज्ञ भन्छन्, ‘मानिसले आफ्नो भावनालाई नियन्त्रित गर्न पनि यस्तो गर्छ। एक अर्का जर्मन वैज्ञानिक यसलाई हाम्रो जातिको मुल व्यवहारका रुपमा लिन्छन्। ुआफैले आफैलाई छुनु आफैलाई नियमन गर्नु जस्तै होु, उनी भन्छन्।
यसरी पटक पटक हातले अनुहार छुँदा हातमा भएको खराब चिज मुख, आँखा र नाकसम्म पुग्छ। त्यहाँबाट शरीरका अन्य अंगमा पनि पुग्छ। उदारहणको लागि कोविड–१९ संक्रमित व्यक्तिको मुखबाट निस्केको पानी दोस्रो व्यक्तिमा पर्छ। हातमा भएका यसका भाइरस अनुहार छुँदा अनुहारसम्मै पुग्छन्। हाल अध्ययनकै क्रममा भए पनि यो भाइरस लामो समयसम्म जिउँदो रहन्छ। भाइरस यति लामो समयसम्म बच्ने भएकोले हातले अनुहार छुनु हाम्रा लागि खतरनाक हुनसक्छ।
हातले अनुहार छुनबाट कसरी बच्ने त रु ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री डेविड क्याम्रनका सहयोगी समेत रहेका कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर भन्छन्, ‘ यो भन्न सजिलो छ कि यस्तो गर्नु हुँदैन तर बास्तवमा यसलाई व्यहारमा लागु गर्न गाह्रो छ। यो एउटा ठूलो समस्या हो। तर एउटा सजिलो उपाय पनि छ। त्यो हो बारबार हात धोइरहने। बारम्बार हात धुनु नै उत्तम विकल्प हो। तर त्यो पनि कति सहज छरु बारम्बार हात धोइरहन साबुन पानीको उपलब्धता हुनुपर्छ।
अरु पनि केही विकल्प छन् जसले अनुहारमा हातले छुने समस्या कम हुन सक्छ। जस्तो हातमा कमलो बल वा कुनै खेलौना समातेर हिड्ने। तर त्यस्ता सामग्री किटाणुरहित भने हुनुपर्छ। हातमा पञ्जा लगाउन पनि सकिन्छ। तर पञ्जा पनि सफा हुनुपर्छ।
केही स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बारम्बार हातले मुख छुने समस्याबाट बच्न मास्क लगाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा सुरक्षाकवच हो। यसले अनुहारमा हातले छोइरहेने बानीलाई केही कम गर्न सक्छ। अथवा छोइहाल्दा पनि तत्कालै हातमा भएका ब्याक्टेरिया मुखमा नपुग्न सक्छन्। बीबीसी